प्रभावी लघु व्यवसाय सामग्री मार्केटिंग उपभोक्ता | Martech Zone
उपभोक्ताहरूलाई प्रभावकारी साना व्यवसाय सामग्री मार्केटि।
बुधबार, सेप्टेम्बर 2, 2015 Douglas Karr
एक whopping 70 प्रतिशत ग्राहकहरु लाई रुचि छ सामग्रीबाट कम्पनीको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् बरु विज्ञापन मार्फत भन्दा। Small 77 प्रतिशत साना व्यवसायहरूले सामग्री मार्केटिंगमा लगानी गरिरहेका छन् अनलाईन आगन्तुकहरूलाई ग्राहकमा रूपान्तरण गर्न। तलको रेखा यो हो:
साझेदारी सामग्रीबाट क्लिकहरू खरीदको परिणाममा पाँच गुणा बढी हुन्छ!
समय खर्च भन्दा बाहिर, सामग्री मार्केटिंग तपाईंको व्यवसाय प्रमोट गर्न महँगो साधन छैन। साना व्यवसायको विशाल विशालता संग एक मजबूत सामग्री प्रबंधन प्रणाली छ र चलिरहेको छ, तिनीहरूलाई सामग्री उत्पादन अनलाइन साझा र साझेदारी गर्न सक्षम। तर के तिनीहरू आफूले गर्न सक्ने सबै गरिरहेका छन्?
के सामग्री मार्केटिंग विधि साना व्यवसाय को लागी काम गरीरहेको छ
इमेल मार्केटिङ - small०% सानो व्यवसायले ई-न्यूजलेटरहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई अनलाइन आगंतुकहरू रूपान्तरण गर्दैछ।
लेख - businesses 78% साना व्यवसायहरूले अनलाइन लेखहरू अनलाइन लेख प्रकाशन गरेर ग्राहकलाई अनलाइन विजिटरमा रूपान्तरण गर्दैछ।
छवि साझेदारी - businesses 75% साना व्यवसायहरूले अनलाइन तस्बिरहरू ग्राहकहरूमा परिवर्तन गर्दछन् फोटो र चित्रहरू अनलाइन साझेदारी गरेर।
भिडियो - businesses 74% साना व्यवसायहरूले अनलाइन भिडियोहरू अनलाइन भिडियो प्रकाशन गरेर ग्राहकलाई अनलाइन विजिटरमा रूपान्तरण गर्दैछ।
यी शीर्ष4तथ्या .्कहरू वास्तवमा किन हामीले सर्कुप्रेसलाई एक को रूपमा विकसित गरीरहेका छौं WordPress का लागि न्यूजलेटर प्लगइन। हामीले देख्यौं कि यति धेरै साना व्यवसायहरूले उनीहरूको सामग्रीमा काम गरिरहेका थिए, तर एक ईमेल प्रणाली छैन जुन आफैंले उपभोक्ताहरूलाई समय-उपभोग वा टेक्नोलोजी चुनौतीपूर्ण एकीकरण र स्क्रिप्टिंग बिना वितरण गर्न सक्दछ।
यो इन्फोग्राफिक द्वारा निर्मित थियो SCORE। प्रत्येक वर्ष, SCORE ले small 375,000 ment,००० भन्दा बढी नयाँ र बढ्दो साना व्यवसायहरूलाई सानो व्यवसाय परामर्श, कार्यशाला र शिक्षा प्रदान गर्दछ। ११,००० भन्दा बढी व्यवसाय विशेषज्ञहरू 11,000२० भन्दा बढी अध्यायहरूमा सल्लाहकारको रूपमा स्वयंसेवा गर्दछन् उद्यमी शिक्षाको साथ स्थानीय समुदायहरूको सेवा गर्ने।
टैग: 2015b2cउत्तम अभ्यासहरूसर्कलसामग्री मार्केटिङइमेल मार्केटिङस्कोरसाना व्यापार
Douglas Karr Wednesday, September 2, 2015
मोबाइल अनुभव र चलनहरूमा यसको प्रभाव
BigCommerce ले उद्यम ईकॉमर्स प्लेटफार्म शुरू गर्‍यो